ကိုယ်ပိုင် Website ဘာကြောင့် ရှိသင့်သလဲ - Technology - Myanmar Business Directory: Golden Place
သင့်မှာ ကိုယ်ပိုင် Website ရှိခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြား သို့မဟုတ် နယ်မှ သင့် Customer များ စက္ကန့်ပိုင်း အတွင်း သင့်ရဲ့ အင်တာနက်ရုံးခန်းသို့ ရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပြီး သူတို့ သိလိုတဲ့ အရာ တွေကို အချိန်မရွေး ဖြေနိင်မှာဖြစ်သလို သင် ပေးသိချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို အချိန်မရွေး ပြော ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Website and Email, Social Media တွေနဲ့ Marketing လုပ်ခြင်းဟာ ကြော်ငြာ လက်ကမ်းစာစောင်တွေ ရိုက်ပြီး ပို့တာထက် အဆပေါင်းများစွာ အကုန်အကျသက်သာသလို မြန်ဆန် ထိရောက်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အနေနဲ့ အောက်ပါအတိုင်း အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက်ဖြင့်ကြော်ငြာခြင်းသည် ပုံနှိပ်ကြော်ငြာခြင်းထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သည့်အပြင် အကုန် အကျများစွာ သက်သာစေပါတယ်။ အင်တာနက်တွင် Website ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင်၏ လုပ် ငန်းကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ကြော်ငြာနိုင်ပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အ သုံးပြုနိုင်သလို ပြောင်းလဲနေသော သင်၏ Service ကို အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် Website ရှိသည့်အတွက် လူကြီးမင်း၏ ကုန်ပစ္စည်းကို ကြည့်ရှုသူ များပြားလာစေပါ တယ်။ ကုန်ကျစရိတ် များသော ပုံနှိပ် မီဒီယာများတွင် အတိုချုံး ရေးသားခြင်းဖြင့် ပုံနှိပ်ခနှင့် စာရွက်ဖိုး သက်သာစေပါတယ်။ ထိုစာရွက်ပေါ်တွင် မိမိတို့၏ Website လိပ်စာကို ထည့်သွင်း ပေးပါက ဝယ်ယူသူများမှ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သင်၏ Website တွင် လာ ရောက် လေ့လာနိုင်သောကြောင့် သင်၏ ကြော်ငြာ ပိုမိုထိရောက်နိုင်ပါတယ်။
2. ဈေးကွက် ချဲ့ ထွင်နိုင်ခြင်း
သင်၏ Website မှတဆင့် အခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအား သင့်ကုမ္ပဏီ၏ သတင်းအချက်အလက်များ အောင်မြင်မှုများနှင့် ဆက်လက်ရရှိနိုင်သည့် အောင်မြင်မှုများကို အသိပေးခြင်းဖြင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်လာနိုင်ရန် ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသာမက နိုင်ငံ ခြားနှင့်ပါ လုပ်ငန်းများကို ဆက်သွယ် လက်ခံ ဆောင်ရွက် နိုင်ပါတယ်။
3. တစ်နေ့ ၂၄ နာရီ – တစ်ပတ် ၇ ရက် – တစ်နှစ် ၃၆၅ ရက်(အချိန်ပြည့်ဝန်ဆောင်မှု)
ကိုယ်ပိုင် Website ရှိခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်း၏ လုပ်ငန်းသည် ပိတ်ချိန်မရှိ ၂၄ နာရီ တစ်ပတ် ၃၆၅ ရက် လုံးလုံး လည်ပတ်နေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကို ဆက်သွယ်လိုသူများအတွက် အကျိုး အများကြီး ရှိစေပါတယ်။
4. အဆင်ပြေမှု ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း
Customer များအနေဖြင့် သင်၏ product and service အချက်အလက်များကို သိရှိနိုင်ရန် သူတစ်ပါးအား မေးမြန်းရန်မလိုအပ်ပဲ အင်တာနက်မှ တဆင့်လျှင်မြန်စွာ ရှာဖွေနိုင်သဖြင့် ပို၍ အဆင်ပြေပါတယ်။
5. ယုံကြည်မှု ပိုမိုရရှိခြင်း
ကိုယ်ပိုင် Website ရှိခြင်းသည် အခြားသူများအား သင့်အကြာင်းကို ပိုမိုသိရှိစေနိုင်ရန်နှင့် သင့်အပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချမှုများပိုမိုတိုးပွားလာစေနိုင်ရန် အကူအညီပေးပါတယ်။ ယခုအခါ နိုင်ငံခြားမှ လာရောက်မည့်သူသာမက ပြည်တွင်းမှ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတို့သည် မိမိတို့ ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုသော ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်များသိရှိနိုင်ရန် နှင့် ကျသင့်ငွေကို သိရှိနိုင် ရန် အင်တာနက်မှရှာဖွေဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ရာကို မဝယ်ယူမီ မိမိတို့ ကုန်ကျ မည့် တန်ဖိုးမှာ ထိုက်တန်၊ မထိုက်တန်နှင့်အလိမ်အညာမခံရစေရန် ထိုကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း ကို အင်တာနက်တွင် ကြိုတင်လေ့လာသော အလေ့အထ ရှိလာကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Customer တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ရယူရန် Website ကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။သင်၏ Visiting Card တွင်လည်း သင့်ကိုယ်ပိုင် Website Address ကို ထည့်ထားခြင်းဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းအပေါ် ယုံကြည်မှုကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Website တစ်ခုရှိခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ အရေးပါမှုကို ပိုမို သိမြင်လာတာ နဲ့အမျှ Website တွေကို ဖန်တီးပေးတဲ့ company များစွာ လုပ်ကိုင်လာကြတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Customer များအနေနဲ့ မိမိတို့အတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိရှိ ဖန်တီးပေးနိုင်မည့် သင့်တော်သော company ကို သေချာရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Digital Dots မှ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လိုအင်များကို အမှန်တကယ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိပြီး သင့်လျော်သော ဈေးနှုန်းများနှင့် အကောင်းဆုံးသော ၀န်ဆောင်မှုများကို သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ထို့ ပြင် အမှန်တကယ် ကျွမ်းကျင်သော ပညာရှင်များ ဦးစီးလုပ်ကိုင်သောကြောင့် အရည်အသွေးနှင့် စိတ်ချရမှုကို အာမခံပေးနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Ditital Dots ဆီကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လှမ်းလာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအစမှအဆုံးကို စိတ်တိုင်းကျသည်အထိ တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ရန် အသင့်ရှိနေပါတယ်။
အနာဂတ်တွင် ထွက်ပေါ်လာ ...
Apple က iWatch စမတ်န ...
About Currency Exchange Rates and ATMs in Myanmar Apr42014
လာမဲ့ ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း နှင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ သက်မွန်မြင့် Apr42014
Software မသုံးဘဲ Folder ကို Lock ချထားရအောင် Apr42014
Telenor Myanmar မှ Sim-Card Distribution အတွက် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များကိုဖိတ်ခေါ် Apr42014
Huawei Authorised Service Center မြန်မာပြည်တွင် ပထမဆုံးစတင်ဖွင့်လှစ် Apr42014
Valentine’s Day Trends in Myanmar: Internet and relations Apr42014
မန္တလေးမြို့ မဟာမုနိ ဘုရားကြီး၏ အနောက်ဘက် ခြေတော်ရင်းဆီက ရိုးရာ ၀ါဆို ခြင်းအလှပွဲတော် Apr42014
Tourism revenues on track to surpass US$1 billion this year Apr42014
စင်ကာပူဈေးဝယ်စင်တာများတွင် ရောင်းချခံနေရသည့် အိမ်အကူများ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မြန်မာများဖြစ် Apr42014
Colorful Parasols of Myanmar - Pathein Htee Apr42014